naaQabyaaladda Haatan. W/Q: Axmed Cali Diiriye. | Somaliland Today
← HAMBALYO MEHER : Dhamaan Magacyadan Hoos ku xusan Waxay Tahniyad u dirayaan (Mr Caalin)
NINKA DAMAACIGA AH QABTA NINKA FAYSAL KAGA YAABIYAY QABTA NINKA DIKTEETARKA AH QABTA NINKA LABADII KUXIGEENE BAARLAMANKA DHULKA FADHIISIYAY QABTA NINKA CALANKA CAS SITA QABTA, BY:LIBAAX YARE. →
naaQabyaaladda Haatan. W/Q: Axmed Cali Diiriye.
“Uf anaa leh qabiilka
Isagoon qof ku tiirsan
Isku taagi karaynin
Ayaantu danbi gaysto
Laga hoos galo eedda”
– Gaariye (AHU)
Qabyaaladda haatan waa qalab ay adeegsadaan qawlaysatado danaystayaal ah. Wuxu hankoodu yahay hunguri iyo damac is huwan. Markay rabaan ujeedadoodda u gaarka ah inay gaadhaan iyaga oo qarda jeexaya ayaa waxay kiciyaan xamaasadda dadka ay qaraabada soke yihiin. Isaga oo hor kacaya ayaa waxa u leeyahay anagu hadaan reer hebel nahay saamigayagii u maqanyahay iyo wax la mid ah. Ileen waa nin qaylinaya oo taageerayaal badanna haysta’e waa hubaal in aanu waxba waayeyn. Hadaba, marku muraadkiisu saxmo ayaa ugu danbaysa duulkii uu lahaa waxbaan idiin qabanayaa isaga o albaabada iyo daaqadahaba kasoo xidhanaya askarna isku xeeraya.
Wuxu ugu talo galay inay ummadu is haysato waayo waxay ku mashquuliyeen qabyaalad iyo qudhunkeed. Buuqii uu aloosay intay ku jeedaan waxa u suuro galaya inay bislaystaan halkay abbaarayeen mudnaanta koobaadna siiyaan kaartooyin cusub si ay awrkooda ugu kicistaan raacayaasha aan caqligooda ku socon.
Coolaadda hoosaysa iyo cunfiga dahsoon e u bulshada dhex dhigay hadduu dagaal isku rogo isaga diihaal iyo diif toonna ma soo gaadhayso waayo uu ugu talo galay. Wuxu haystaa baasaaboor heer caalami ah oo uu halku doono kaga dagayo. Caruurtiisu dalkaba ma joogaan wax ka kala daadsanna ma jirto. Danihiisii gaar ahaaneed uu gaadhay wadaduu doono ha u maro’e. Wuxuu muujiyay dadaal badan isaga oo sifo khaldan u maray. Wuxuu dadkii kaga tagay dumis iyo dulli saaran o ay u dheertahay been la masruufsado.
Waxay duulkii isku qanciyeen in eray kasta o afkiisa kasoo baxayaa run yahay u fiirshasho la aan. Sababtu wey iska caddahay: wuxuu ka qabsaday maankoodii isaga oo u kicinaya xamaasadooda hab qabyaaladyasan. Wuxuu ka daboolay xaqiiqada qarsoon e ah inuu danihiisa duulaan u yahay. Ileen waa af miishaar ku xeel dheer arimahan’e wuxu tusiyay xaqiiq an xaqiiqo ahayn oo mala awaal ku salaysan. Duulku kama fahmaan waayo cirkaas ayay isla marayaan. Waxa laga dhaadhiciyay in xaqooda loo soo dhicin doono guulina xigayso. Maxsuulkiina wuxu noqday inay dirir iyo difaac ba ku taageeraan iyaga oo hiil iyo hooba la garab istaagaya. Si ay u muujiyaan taageero waxay ugu doodaan meelaha la isugu yimaado sida maqaaxiyaha iyo marfashyada lagu qayilo. Markad aragtaba wey xiiqsanyihiin. Haddii aad weydiiso waxa faaido ah ee kasoo gasha dhaqaale ahaan iyo dhinac kastaba jawaabtoodu waa WAXBA!!!
Ma waantoobaan kii kasta ee u imaadaana marinkii kii hore u jeexay ayun buu maraa. Iyaga ayuun baa ku dhibban oo weli dheef la taaban karayo may urin. Khibrad ugama korodho waayo maankoodu waa maqal lala leeyahay oo mafaatiixdoodii luntay.
Waan yaabanahay ee ma ila yaaban tihiin! Goormay caqligooda ka shaqaysiin doonaan? Hadmay ka ilbixi doonaan? Tallow yaa uga gurman doona haadaanta ay ka lushaan? Miyaanay mar qudha ka waantoobayn sida indho la aanta ah e ay isaga daba galaan qofkii afkiisa u kala furaba. Waa suaalaha aan is weydiiyo markan naftayda wada sheekaysanayno.
Hadaba, oday sayn caddaale ah misna fahmay cillinkayga ayaa igu idhi sidan:” Waxaynu joognaa duni daacaddii ku yaraatay gaajaduna ku badatay. Iga gunto xikmaddan: qof kasta o qaylinaya waxbaa u qarsoon. Maaha inaad sida mawaashiga noqoto sicii sii raac. Maskax wax kuu kala saafta iyo qalbi saafiya ayaad leedahay. Waxaa kula gudboon inaad miisaanka saarto wuxuu ku hadaaqay. Ku darso’ o, asal ahaan qabyaaladdu maaha wax jira; waa dariiq lagu dago wax ma garatada si loogu gaadho dano gaar ah. Midna ogow, inaadeernimo joogto ah ma jirto; dano joogto ah ayaa jirta waxaad se isku dan tihiin midkay aragti iyo ujeeddo idinka dhaxayso”.